မျက်မှောက်ရေးရာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 408
မိုးမခ (ဓာတ်ပုံသတင်း) ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၂ လွန်ခဲ့တဲ့ မေလ ၃၁၊ ၂၀၁၂ (ကြာသာပတေးနေ့) ရက်နေ့က စာရေးဆရာကြီး သခင်မြသန်းရဲ့ ကွယ်လွန်းခြင်း (၃၆) နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အခမ်းအနားကို သင်္ကန်ကျွန်းမြို့နယ်၊ စ/ သုမင်္ဂလာရပ်ကွက်ရှိ မဟာဝိသုတာ ရာမစာသင်တိုက်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားကို နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၁၁း၀၀) ထိကျင်းပခဲ့ပြီး အဆိုပါအခမ်အနားသို့ စာရေးဆရာများ၊ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ မိတ် ဆွေများနှင့် အခြားမိတ်သင်္ဂဟများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာများသမဂ္ဂမှလည်း သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ဦးဝင်းငြိမ်း၊ ဦးမိုးဝင်း၊ မဒုံ နှင့် ဦးစိန်တင် ဦးအောင်ထိုက်၊ ဦးမြင့်ဟန်၊ မဖြိုးဖြိုးအောင်၊...
မေလ ၃၀ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ နန်းသူးလေ (ကေအိုင်စီ) ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင်အတွင်း မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းရှိ ဒုက္ခသည်များကို လာမည့် ဇွန်လ ၂ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်း ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သွားရောက်တွေ့ဆုံမည်ဟု သူမ၏ ထိုင်းခရီးစဉ်၌ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူ KNU/KNLA ငြိမ်းချမ်း ရေးကောင်စီမှ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဒေါက်တာတီမသီက ယနေ့ အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်သည်။ “(မယ်လ)ဒုက္ခသည်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့ အရင်သွားတွေ့မယ်။ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ပြဿနာတွေကို သူ(ဒေါ်စု) သိအောင်လုပ် မယ်။ အဓိကတော့ လူထုတွေရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတာကို သူ့အနေနဲ့ လက်တွေ့ကျကျသိဖို့ သူသွားမှာပေါ့။”ဟု သူက ပြောသည်။ KNU/KNLA ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီသည် ထိုင်းအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်မည့်နေရာများနှင့် တွေ့ဆုံလို သည့်အဖွဲ့အစည်းများကို လိုက်လံဆက်သွယ်ကာ...
from Karen Newsletter (KIC News) မေလ ၂၉ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ (ကေအိုင်စီ) အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယော့ခ်ပြည်နယ် ဘတ်ဖလိုမြို့တွင် နေထိုင်သည့် ကရင်လူငယ် ၃ဦး အမေရိကန်\_ အစိုးရမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့် ၂၀၁၂ခုနှစ်အတွက် ပညာတော်သင်ဆု(Scholastic Achievement Recognition)ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အတွက် ပညာတော်သင်ဆု(စကောလားရှစ်ပ်)ကို ဘတ်ဖလိုမြို့ရှိ ကျောင်းသူကျောင်းသား ၂၄၆ဦးအား ရွေးချယ်ပေးအပ်ခဲ့သည့် အထဲတွင် အထက်တန်းကျောင်းကို ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့သည့် နော်အယ်စေးထူး ၂၀နှစ်၊ စောဝင်းကိုဟန် ၁၈နှစ်နှင့် နော်မိုရင်းဒါသွယ် ၂၁နှစ်တို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Lafayette High School အထက်တန်းကျောင်းတွင် ဘာသာစုံ၌ အမှတ်အများဆုံး ရရှိခဲ့သူ နော်မိုရင်းဒါသွယ်က “မျှော်လင့်မထားဘဲ အခုလို ပညာသင်ဆုရတော့ ၀မ်းသာတယ်။ သူများနိုင်ငံသားတွေကြားမှာမို့ ဂုဏ်လည်းယူတယ်။ တချိန်မှာ...
ဓာတ်ပုံသတင်း မေ ၂၉၊ ၂၀၁၂ (ဓာတ်ပုံ – AP) ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရက်အနည်းငယ်ကြာနေထိုင်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ည ဘန်ကောက်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ No tags for this post.
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာသင်္ကြန်စည်ကား မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ မေ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ မေလ ၂၇၊ တနင်္ဂနွေနေ့ခင်းက ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ၊ မြန်မာကွန်မြူနီတီစင်တာထူထောင်နိုင်ရေး ရန်ပုံငွေရှာဖွေသည့် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဘေးဧရိယာ၊ ယူနီယံစီးတီး ပန်းခြံမှာ ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာမိသားစုများသာမက လူမျိူး ဘာသာပေါင်းစုံက လာရောက်ဆင်နွှဲ ပျော်ရွှင်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Tags: ဆန်ဖရန်
by Yangon Press International on Monday, 28 May 2012 at 03:48 · မေလ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်-ဟံသာ (YPI) မှော်ဘီမြို့နယ် မြောင်းတကာရှိ ရန်ကုန်ကရောင်း သံရည်ကြိုစက်ရုံကို အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေသော အလုပ်သမားအချို့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ချို့တဲ့လာကြောင်းအလုပ်သမား အရေး ဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသည့် အလုပ်သမားများက ပြောသည်။ “ဒီနေ့မနက်ပဲ ၀မ်းကိုက်တဲ့တယောက်ကို မှော်ဘီဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်၊ အခြားသူတွေလည်း အစာအိမ်အောင့်တဲ့သူရယ်၊ အားနည်းတဲ့သူတွေကို နီးစပ်ရာဆေးခန်းလိုက်ပြနေရတယ်”ဟု အလုပ်သမားအရေးဆာင်ရွက်ပေးနေသူ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ဒေါ်မာမာဦးက ပြောသည်။ မြောင်းတကာ ရန်ကုန်ကရောင်း သံမဏိစက်ရုံမှ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသူများအား ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၅ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်၊ (သတင်းဓါတ်ပုံ-MMO) ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေသူများထဲတွင် ၀မ်းကိုက်ရောဂါကြောင့် မှော်ဘီဆေးရုံသို့တက်ရောက်ကုသနေသူ...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (Photo: AP –Prime Ministers, from left, Thein Sein of Myanmar, Nguyen Tan Dung of Vietnam, Hun Sen of Cambodia, and Bouasone Bouphavanh of Laos, ) ၁၉၉၆ခုနှစ် ဗီယက်နမ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ ဗီယက်နမ်း၊ စင်ကာပူ စက်မှုဇုံ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်အစိုးရပိုင် Becamex IDC Corporation နဲ့ စင်ကာပူ အစိုးရပိုင် Sembcorp Development Ltd (SDL). တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ စင်ကာပူက နိုင်ငံတကာကုမဏီများကို ခေါ်ပြီး၊ ဗီယက်နမ်မှာ စိတ်ချစွာလုပ်ကိုင်ဖို့ အာမခံပေးတယ်။ မြေ၊နေရာငှားရမ်းခကို စင်ကာပူနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ ခွဲဝေယူကြတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၆ နောက်ပိုင်းမှာ၊ အခြေအနေပိုကောင်းလာတဲ့အတွက်...
သူရမျိုး (YPI) မေ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ဝေဟင်မှ တွေ့ရသည့် လှည်းတန်းလမ်းဆုံ ယနေ့ညနေ ၆ နာရီကျော်က ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်း ၇ လမ်း ၅ လွှာတွင် ငှားရမ်းနေထိုင်သည့် ညီအမနှစ်ဦးအား လွင်ဦးဆိုသူ လူငယ်တဦးက ဓါတ်ဆီလောင်းမီးရှို့မှု ဖြစ်ပွားသဖြင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ မိန်းကလေး ၂ ဦးကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့လိုက်ရသည်ဟု သိရှိရသည်။ No tags for this post.
Page 408 of 438«1...406407408409410...438»
ကာတွန်းမင်းထက်လူရဲ့ အမှိုက်ပုံထဲထားခဲ့မယ် ထင်လို့လား … https://t.co/Uv4DamOkTz https://t.co/pN3n6yZWVN about 54 minutes ago ReplyRetweetFavorite
မောင်မောင်စိုး ● အင်စတီကျူးရှင်းနိဒါန်း https://t.co/bivYJ0L4ly https://t.co/VFC07Vivpz about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite